अभिनेता दयाहाङ राई गायव ! « Naya Page
अभिनेता दयाहाङ राई गायव !
प्रकाशित मिति : 16 November, 2018 5:30 pm
काठमाडौं, ३० कात्तिक । गायक हेमन्त रानाको स्वरमा रहेको चर्चित गीत ‘साइँली’ नाम सापटी लिएर निर्माण भएको फिल्म ‘साइँली’ को फस्टलुक पोस्टर र प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ ।
बैदेशिक रोजगारीको कथा वाचन गर्ने फिल्मको पोस्टरमा अभिनेत्री मेनुका प्रधान (साइँली) मात्र फिचर्ड छिन् । फिल्मको टाइटल अनुसार पोस्टर तयार पारिएको निर्देशक रामबाबु गुरुङले बताए ।
युट्युबमा डेढ करोडको नजर परिसकेको ‘सुन साइँली’ गीतमा मेनुकाको जोडी अभिनेता गौरव पहाडीसँग बाँधिएको थियो । फिल्ममा पनि यी दुई नै जोडीको रुपमा प्रस्तुत छन् । चलचित्रको पोस्टरमा दयाहाङ गायव भएका छन् । उनलाई पोष्टरमा देखाइएको छैन ।
फस्टलुक पोस्टरमार्फत फिल्मको प्रदर्शन मिति चैत १५ लाई घोषणा गरिएको छ । गीतले बोकेको भावलाई फिल्ममा उतारेको निर्माण टिमको भनाई छ । फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राई पनि प्रमुख भूमिकामा छन् । गायक हेमन्त राना र गौरव पहारीले मिलेर फिल्म निर्माण गरेका हुन् ।
जिएच इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा माओत्से गुरुङ, कृपा सिंह, प्रकाश घिमिरे, अरुण कार्कीलगायतका कलाकारको मुख्य भुमिका रहेको छ । निर्देशक गुरुङको कथा रहेको फिल्ममा विशाल गुरुङ र मोहन थापा निर्मातामा छन् ।
बिजय अवाले, विकाश पुजास र सुवेक्छा केसी सहनिर्माताको रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता मणिराम पोखरेल हुन् । फिल्ममा काली प्रसाद बास्कोटा, सुशान्त गौतमको संगीत, शैलेन्द्र डि. कार्कीको छायांकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन छ ।
हलिउड अभिनेत्री तथा गायिका ‘म्यान्डी मुर्रे’ सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालमा
काठमाडौं, १२ जेठ । बसन्त ऋतुको आगमनसँगै पर्वतारोहणको मौसम छ । वर्षेनी हजारौँको संख्यामा पर्वतारोहीले
दुई दिनमै ‘दुई रुपैँया’ ट्रेन्डिङ्गको नम्बर दुईमा
काठमाडौं, १२ जेठ । चलचित्र ‘दुइ रुँपैया’ युट्युबमा रिलिज भएको दुई दिनमा नै ट्रेन्डिङको नम्बर
‘ए मेरो हजुर ३’ लिएर निर्देशक झरना थापा र नायिका सुहाना थापा यूरोपमा
काठमाडौं, १२ जेठ । निर्देशक झरना थापा र नायिका सुहाना थापा चलचित्र ‘ए मेरो हजुर